Mitovy Daholo ve ny Fivavahana Rehetra? | Fanontaniana Ara-baiboly
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Alur Amharique Anglisy Arabo Arabo (Liban) Armenianina Armenianina (Andrefana) Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Basque Batak (Toba) Bengali Biak Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chin (Hakha) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fon Frantsay Ga Galoà Goujrati Goun Grika Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Hindi (Romanina) Holandey Hongroà Iban Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Javaney Kabuverdianu Kachin Kamba Kambôdzianina Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kazakh (Arabo) Kikongo Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwanyama Letonianina Lingala Litoanianina Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mapudungun Marathe Masedonianina Maya Mingrelian Mongol Myama Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Norvezianina Nzema Népali Okpé Oromo Ossète Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Curaçao) Pendjabi Pendjabi (Shahmukhi) Persianina Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Quiché Rarotonga Romanianina Rosianina Rômania (Vlax any Rosia) Rômania (Macédoine) Rômania (Macédoine) Sirilika Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Sinoa (Shanghaï) Sinoa Kantôney Notsorina Sinoa Sichuan Slovaky Slovenianina Soedoà Somali Soundanais Sranan Tongo Swahili Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Talian Tamoul Tarasque Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Alemà Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Angoley Tenin’ny Tanana Aostralianina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Britanika Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Frantsay Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Perovianina Tenin’ny Tanana Poloney Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Silianina Tenin’ny Tanana Soedoà Tenin’ny Tanana Tseky Tenin’ny Tanana Venezoelianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tongan Tseky Tsonga Turkmène Twi Tzotzil Télougou Venda Vietnamianina Xavante Xhosa Yorobà Zoloa tzeltal Éwé
Tsia, tsy mitovy ny fivavahana rehetra. Maro ny fivavahana resahin’ny Baiboly hoe tsy ankasitrahan’Andriamanitra. Azo sokajina ho roa izy ireny.
1: Ireo fivavahana manompo andriamani-diso
Milaza ny Baiboly fa “zava-poana” sy ‘tsy mahasoa’ ny mivavaka amin’ny andriamani-diso. (Jeremia 10:3-5; 16:19, 20) Nandidy ny firenen’Israely fahiny i Jehovah * Andriamanitra hoe: “Aza manana andriamani-kafa hifandrafy amiko.” (Eksodosy 20:3, 23; 23:24) ‘Nirehitra ny fahatezeran’i Jehovah’ rehefa nanompo andriamani-kafa ny Israelita.—Nomery 25:3; Levitikosy 20:2; Mpitsara 2:13, 14.
Tsy miova Andriamanitra. Mbola tsy tiany raha mivavaka amin’ireny “antsoina hoe ‘andriamanitra’” ireny ny olona. (1 Korintianina 8:5, 6; Galatianina 4:8) Tsy avelany hifanerasera amin’ireo manaraka fivavahan-diso izay te hanompo azy. Nandidy izy hoe: “Mivoaha eo aminy ianareo, ary misaraha aminy.” (2 Korintianina 6:14-17) Andriamanitra ve dia hilaza an’izany raha mitovy ny fivavahana rehetra ary samy manampy ny olona hifandray aminy?
2: Ireo fivavahana mivavaka an’ilay tena Andriamanitra nefa tsy manompo azy araka izay tiany
Nisy fotoana ny Israelita nivavaka tamin’Andriamanitra sady nanaraka ny fanaon’ireo nanompo andriamani-diso. Nino ny zavatra ninoan’izy ireny koa izy ireo. Nampifangaroin’izy ireo ny fivavahana marina sy diso. Tsy neken’Andriamanitra izany. (Eksodosy 32:8; Deoteronomia 12:2-4) Nomelohin’i Jesosy koa ny mpitondra fivavahana tamin’ny androny, satria tsy nety ny fomba nanompoan’izy ireo an’Andriamanitra. Niseho ho mpivavaka izy ireo nefa nihatsaravelatsihy. ‘Tsy noraharahainy izay mavesa-danja kokoa ao amin’ny Lalàna, dia ny manao ny rariny sy ny mamindra fo ary ny ho mendri-pitokisana.’—Matio 23:23.
Toy izany koa ankehitriny. Izay fivavahana manaraka ny fahamarinana ihany no manampy ny olona hifandray amin’Andriamanitra. Ao amin’ny Baiboly izany fahamarinana izany. (Jaona 4:24; 17:17; 2 Timoty 3:16, 17) Mahatonga ny olona hanalavitra an’Andriamanitra ireo fivavahana mampianatra zavatra tsy mifanaraka amin’ny Baiboly. Avy amin’ireo olona nanompo andriamani-diso ny fampianarana maro eritreretin’ny olona hoe avy ao amin’ny Baiboly. Anisan’izany ny fampianarana momba ny Andriamanitra telo izay iray, ny fanahy tsy mety maty, ary ny fampijaliana mandrakizay any amin’ny afobe. “Very maina” na tsy misy dikany ny fivavahana mampianatra an’ireny, satria soloany fampianaran’olombelona ny didin’Andriamanitra.—Marka 7:7, 8.
Halan’Andriamanitra ny fivavahana mihatsaravelatsihy. (Titosy 1:16) Raha te hanampy ny olona hifandray kokoa amin’Andriamanitra ny fivavahana iray, dia tokony hisy vokany eo amin’ny fiainany andavanandro, fa tsy hampirisika azy hanaraka fombafomba fotsiny. Milaza, ohatra, ny Baiboly hoe: “Raha misy olona mihevi-tena ho mpivavaka nefa tsy manisy lamboridy ny lelany, fa mbola mamitaka ny fony ihany izy, dia zava-poana ny fivavahana arahin’izany olona izany. Izao no fivavahana madio sady tsy misy loto eo imason’Andriamanitra Raintsika: Ny mikarakara ny kamboty sy ny vehivavy mpitondratena amin’ny fahoriany, ary ny miaro tena hatrany tsy ho voapentimpentin’izao tontolo izao.”—Jakoba 1:26, 27.
^ feh. 2 Jehovah no anaran’ilay tena Andriamanitra resahin’ny Baiboly.
Hizara Hizara Mitovy ve ny Fivavahana Rehetra ary Samy Manampy ny Olona Hifandray Amin’Andriamanitra?
ijwbq no. 89